Monday November 04, 2019 - 09:10:18 in Wararka by Super Admin
Roobab Mahiigaan ah oo saameyn ku yeeshay dadka iyo duunyada ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay degmooyin iyo deegaanno katirsan gobollada Waqooyi Bari Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya gobolka Bari ayaa sheegaya in roobab socday wax ka badan 24 saacadood xiriir ah ay ka da'een degmooyinka Caluula iyo Boosaaso oo dhammaantood dhaca xeebta badda cas.
Dad ku sugan degmada Caluula ayaa sheegaya in roobabka oo daadad watay ay burburiyeen qaar kamid ah guryaha degmada iyagoona geystay waxyeello ubadan burbur.
Kaamamka ay deganyihiin dadka barakacayaasha ah ee magaalada Boosaaso ayaa lagasoo sheegayaa duruufo adag oo haysta dadka barakacayaasha ah kadib markii ay roobabku waxyeelleeyeen guryihii cooshadaha ka sameysnaa.
degmooyin katirsan gobollada Sool iyo Sanaag ayaa lagasoo sheegayaa roobab mahiigaan ah, sidoo kale degmooyinka dhaca xeebta ee gobolka Nugaal ayay roobab saacado badan socday ka da'een balse lamasoo sheegin waxyeello ay geysteen.
Deegaanka Towfiiq ee dhaca gobolka Mudug ayay waxyeellada ugu daran ka geysteen roobabka, waxaa la sheegay in daadad ka dhashay roobabka ay la tageen xoolo isugu jira ari iyo geel.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in daadadka roobabka ay burburiyeen guryo walina waxaa taagan cabsi laga qabo in togagu ay biya badan keenaan ayna qaadaan dadka xoola dhaqatada ah ee togagga dhax deggan.
Dibad baxyo rabshado wata oo ka dhacay Ceerigaabo iyo dagaal ka dhacay Bariga Sanaag.
Al Shabaab oo Markale Oo Kooxo Jawaasiis ah ku laysay Gobollada Jubbooyinka.
Dagaallo Khasaara dhaliyay oo Markale ka dhacay deegaanka Bariire.